hpaji ning hkrng ni ka da ai web yu hka ja ga
" ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ( ၇ဝဝဝ ) ကို လူ ( ၁ဝဝ ) နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် "
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ( ၇ဝဝဝ ) ကို လူ ( ၁ဝဝ ) နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် ".
မူရင်းသတင်းက 100people.org က
ပုံဖော်ပြသူက Tech Insider က
သတင်းရေးသူက Business Insider က
ကိုညီညီ ( တောင်ကြီး ) ဖြစ်ပါကြောင်း
Posted by Nwawt seng at 11:18 PM0comments
ထိုကျောင်းအသစ်ကိုရောက်သည့် ပထမဆုံးနေ့ တွင် Required Art ဆိုသည့်အခန်းတွင် မြန်မာကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ ရှိခဲ့ပါသည်။ အခန်းဆရာက Where are you from? လို့ မေးရာတွင် ကျွန်တော်က I’m from Burma လို့ ပြောရာတွင် ဆရာကနေ အတန်းထဲတွင်မြန်မာကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ ပြောပြီး ကျွန်တော့်ကို နေရာတစ်နေရာတွင်ထိုင်ခိုင်းပါသည်။ ထိုနေရာသည် မြန်မာကောင်မလေးထိုင်သော နေရာဧ။် နောက်ကခုံဖြစ်သည်။ သူနှင့် တမင် ထိုင်ခိုင်းချင်းဖြစ်မည်ပာု နောက်မှနားလည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့ တွင် ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ဘယ်သူကမြန်မာဆိုတာမသိပါ။ ကျောင်းခေါင်းလောင်းထိုးပြီး အတန်းချိန်စပြီးတဲ့အခါ ဆရာကနေ ညာဘက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး He’s from Myanmar လို့ ပြောတော့ သူက ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကလာတာလား စကားစပြောပါသည်။ သူနှင့် စကားပြောရချိန်တွင် မြန်မာသူငယ်ချင်းရလိုက်ပြီ ၊ မသိတာတွေအကုန်မေးနိုင်သည်ဆိုတာကြောင့် စိတ်ပျော်ရွှင်သွားပါသည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်က မြန်မာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပဲ မြန်မာလိုပြောနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်လာမည့် နေ့ များတွင်သူသည် ကျွန်တော်မေးသမျှကို ဖြေသူ ၊ ကျွန်တော့်ကို အများကြီးသင်ပြပေးသူ ဖြစ်လာပါသည်။ AP အခန်း ဆိုတာမသိခဲ့ပါ။ သူက စတင်မိတ်ဆတ်ပေးတာဖြစ်ပါသည်။ှတသူနှင့်ကျွန်တော်အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါသည်။ Report Card တွေ ပေးသောအချိန်တွင် 94% ပျမ်းမျှရမှတ်ရသော သူ့ ပာာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ရသော Report Card ကို မပြချင်သောအခါ သူက ကျွန်တော့်ပာာကို အတင်းဆွဲယူပြီး ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန် ၊ တစ်ခါတစ်လေ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တွေ့ ရင် မနက်ခင်းတူတူ ကျောင်းကို ကားဂိတ်ကနေ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို သတိရပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို ဗပာုသုတတွေ ကျွန်တော်မမေးတာတောင် ပြောပြတတ်ပြီး အမြဲတမ်း honor, honor အတန်းပဲ ၀င်အောင် ပြောတတ်ပါသည်။ သူ ကနေ တစ်ဆင့် ကျောင်းတွင် မြန်မာတစ်ယောက်ရှိတာကို ပြောပြပါသည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပင် သူသည် ကျွန်တော့် Drama ESL အခန်းတွင် ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်အစက သတိမထားမိပါ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲတွင် အပူတွေရှိနေတာကြောင့် အတန်းတစ်ခုလုံးကို လိုက်မကြည်မိပါ။ နောက်သိတော့ လိုက်ကြည့်တော့မှ မြန်မာပာုထင်ရသော သူတစ်ယောက်ကို Where are you from? လို့ သွားမေးတော့မှ ငါမြန်မာကလာတာဆိုပြီး စကားတွေပြောပြီး သူငယ်ချင်းစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တတ်သော ကျောင်းအသစ်တွင် ရသော အချိန်စာရင်းက အခန်း(၂)ခုတွင် မြန်မာ(၂)ယောက်နှင့် တွေ့ ရတာ ထူးခြားလှပါသည်။ သူနှင့် ကျောင်းဆင်းသောအခါ ဘတ်စ်ကား တူတူစီးပြီး ပြန်ကြပါသည်။ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူတွေ ကြပ်နေသော ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ပာိုရောက် ဒီရောက် စကားတွေပြောကြတာကို ခုချိန်ထိမှတ်မိပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ အိမ်နားကို လမ်းလျှောက်တောင် သွားကြပါသည်။ ကျောင်းက Brooklyn, New York တွင်တည်ရှိပြီး Coney Island ဆိုသည့် ကမ်းခြေနှင့်နီးတာကြောင့် သူနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ကမ်းခြေကို Q ရထားနှင့် သွားကြပါသည်။ Kings Highway Q train station သည် ကျောင်းနားက ရထားဂိတ်ဖြစ်ပါသည်။ Q လိုင်းပေါ်တွင် Kings Highway နှင့် Coney Island သည် (၄) (၅) မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဆင်းတာနှင့် ကမ်းခြေကို နှစ်ယောက်သား သွားကြပါသည်။ ရန်ကုန်တွင်နေတုန်းက ကမ်းခြေကိုအရမ်းသွားချင်ပါသည်။ အခု ကျောင်းဆင်းတာနှင့် ကမ်းခြေကို (၁၅)မိနစ် မိနစ် (၂၀)အတွင်းရောက်တာကြောင့် ကြိုက်မိပါသည်။ ရန်ကုန်ကလူတွေ ကမ်းခြေသွားချင်ရင် ချောင်းသာကို ကားအကြာကြီး မောင်းသွားရတယ်။ ငါကတော့ (၁၅)မိနစ်နဲ့ ရောက်တယ် ဆိုတာကိုကြိုက်နှစ်သက်မိပါသည်။ သူနှင့် ကမ်းခြေကို ရောက်သည့်အခါ သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ကြပါသည်။ သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ကြသောအခါ မြင်ရသောအတွဲတွေကိုကြည့်ပြီးသူက တစ်နေ့ တော့ ငါကမ်းခြေကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့်လာချင်တယ် ဆိုတာကိုပြောပါသည်။ နောင်တစ်ချိန်တူတူသွားလည်း ဒါပဲပြောပါသည်။ တစ်ချိန်က သွားတော့ ရာသီဥတုမကြည့်ဘဲ သွားတာကြောင့် လေတွေတအားတိုက်တာကြောင့် သဲတွေက ပါးစပ်ထဲ ၊ နှာခေါင်းထဲတောင် ၀င်လာတာကို တွေ့ ကြုံရပါသည်။ အလွန်ခံရခက်ပါသည်။ စကားတောင်မပြောနိုင်ပါ။ ဒီလို ရာသီဥတု အေးပြီး လေတွေတအားတိုက်သည့်အချိန်တွင် ကမ်းခြေလာသည့်သူအရူးသည် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် မြန်မာကောင်မလေးကို ခေါ်လို့ မရပါ။ သူကမအားဘူး ဆိုပြီးလာမတွေ့ ပါ။ သူက စာအရမ်းလုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သည်ပာု ပြောပါသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူနှင့်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး မြန်မာကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက် နှင့်သင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၃ ၀န်းကျင်တွင် နယူးယောက်မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မြန်မာဆရာတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ သူ့ ကို သင်ပေးသော ဆရာသည် ကျွန်တော့်ကို သင်ပါသည်။ ဒီဆရာသည် မြန်မာကလေးတွေ တော်တော်များများကို သင်ပါသည်။ ကျွန်တော်က James Madison High School သွားတော့ သူက အဲ့ကျောင်းမှာ မြန်မာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့ ကိုသိလားဆိုတော့ ကျွန်တော်ကသိတယ်လို့ ပြောတော့ သူ့ အကြောင်းတွေပြောပြပါသည်။ှသူ ကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ကြောင်း ၊ှSAT တွင်အမှတ်မြင့်မြင့်လိုချင်ပေမဲ့ အခုတော့ အင်္ဂလိပ်စာတွင်အမှတ်တွေ တစ်အားနည်းနေကြောင်း စတာတွေကို ပြောပြပါသည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို မပြောပြတာတွေ အကုန် ကျွန်တော်သိလိုက်ရပါသည်။ ဒီဆရာသည် ကျွန်တော်နားမလည်သော Chemistry ကို အဓိကထားရှင်းပြပါသည်။ ကျွန်တော် သိပ္ပံတွင်မတော်ပါ။ ကြိုက်လည်း မကြိုက်ပါ။ လုံးဝကိုမကြိုက်ပါ။ ကျောင်းတွင် အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြတာ ကျွန်တော်နားမလည်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရတာလည်း နားမလည်ပါ။ သူ မြန်မာလိုရှင်းပြမှ ၊ ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာတွေကို တစ်ကြောင်းချင်းစီ မြန်မာလိုရှင်းပြမှ ကျွန်တော်နားလည်ပါသည်။ သူပြောပြမှ မေးခွန်းတွေကို ဖြေတတ်သွားပါသည်။ အလွတ်ကျက်ဆိုတာ လုံးဝမရပါ။ မေးခွန်းတွေက ဖြေရှင်းရတာတွေဖြစ်ပါသည်။ အင်မတန်ခက်ပါသည်ပာုသာ ပြောချင်ပါသည်။ ကိုယ့်ပာာာကိုယ်တောင် ဘာလုပ်နေမယ်ဆိုတာတောင် နားမလည်ပါ။ သူပြောပြမှ အရင်ကထက်ဆိုင်ရင် နားလည်လာပါသည်။ အကုန်အထိ နားမလည်သေးပါ။ သူပြောပြလို့ စာမေးပွဲပောာင်းတွေကို လေ့ကျင့်ခိုင်းလို့ ကျွန်တော် Chemistry ကို ကျလုနီးပါးကနေ 82 လောက်နှင့် အောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် New York ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်တာဖြစ်သည့်အတွက် New York State Regent Exam ကိုဖြေရပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူ တိုင်းဖြေရပါသည်။ ဘာလာမယ်ဆိုတာ ကြိုမသိပါ။ သင်ပေးတဲ့ ဆရာ ၊ ဆရာမတွေ တောင်မသိပါ။ မေးခွန်းပောာင်းတွေကို သုံးပြီးလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းပောာင်းတွေနှင့် ပုံစံတူသည်ပာု ဆရာမတွေက ပြောကြပါသည်။ သူက ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းပောာင်းတွေ အများကြီးဖြေခိုင်းပါသည်။ အိမ်စာတွေလည်း အများကြီပေးပါသည်။ သူက ကျွန်တော်နားမလည်သော တစ်ခြားဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားပေးပါသည်။ 10th grade တွင် Geometry သင်ရသည့်အတွက် ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ သင်္ချာတွေကို သင်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို ၁၀ တန်းအပြီး နွေရာသီတွင် နောက် (၁၁)တန်းအတွက် Physics, Trignometry တွေကို ကြိုသင်ပေးပါသည်။ စာအုပ်လည်း ငှားပါသည်။ှSAT လည်း သင်ပေးပြီး အထူးသဖြင့် သင်္ချာကို သင်ပေးပါသည်။ ထိုနွေရာသီက အင်မတန်ခက်ခဲပါသည်။ ရူးလောက်အောင် ရူးသွားသည့် နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်ထဲတွင် အမေရိကန်တွေနှင့်ှSAT ကျူရှင်တူတူတက်သည့်အခါ ကျွန်တော့် အင်္ဂလိပ်စာအမှတ်တွေသည် သူတို့ နှင့်ယှဉ်လိုက်ရင် အင်မတန်နိမ့်နေတာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျရပါသည်။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုပေမဲ့ မလွယ်သော စာပဲကြည့်နေသော နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ှSAT စာအုပ်တွေက တစ်အုပ်ထဲမသုံးပါ။ ဆရာက Gruber, John Chang 50 SAT Math Tips စတာတွေကိုဝယ်ခိုင်းပြီး ထိုစာအုပ်တွေပါသင်တာကြောင့် မလွယ်ခဲ့ပါ။ Gruber စာအုပ်က သင်္ချာပုဒ်စာတွေကို တွက်နေသည့်ညအချိန်ကို မှတ်မိနေပါသည်။ ပိာုဘက်တိုက်က ကောင်လေးက ဆော့နေပြီး ကျွန်တော်ကတော့ စာထိုင်လုပ်နေပါသည်။ ဆရာက ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာထိုင်ပြီး ကျွန်တော်က သင်္ချာတွေတွက်နေပါသည်။ သူက တစ်ပုဒ်ရှင်းပြပြီးရင် နောက်အပုဒ်တွေ ကိုယ့်ပာာကိုယ်တွက်လို့ လုပ်ခိုင်းပါသည်။ တွက်သည့်အခါ ကျွန်တော်တကယ်နားမလည်ကြောင်းသိရပါသည်။ ထိုအခါ ပြန်မေးရပါသည်။ စာသင်ပြီးသည့်အချိန်တွင် ခေါင်းတွေသိပ်ကိုက်နေတတ်ပါသည်။ အရမ်းပင်ပန်းထားတာကြောင့် စာအကြောင်းကိုတောင် စဉ်းစားလို့ မရပါ။ အပန်းဖြေစေသည့်အရာကို စဉ်းစားရပါသည်။ ကျွန်တော် flute ( မြန်မာလိုအခေါ် ပလွေ ) ကိုမှုတ်ပါသည်။ သီချင်းဖွင့်ပြီး သီချင်းလည်းနားထောင်ရင်း flute မှုတ်ပါသည်။ ထိုသို့ မှုတ်ပြီး ဂီတထဲကို နှစ်မျောသွားတာကောင်းပါသည်။ လက်တွေ့ ဘ၀ကို ပြန်တောင်မလာချင်တော့ပါ။ မြန်မြန်ပီးပါတော့ပာုသာ ဆုတောင်းနေမိသည်။ Youtube video တွေကိုကြည့်ရင်း ဘေးနားကှUp Next ဆိုသည့် ပြသည့် ဗီဒီယိုတွေကို နှိပ်ရင်း နှိပ်ရင်း နဲ့ အချိန်ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားပါသည်။ ထိုအချိန်က ကျွန်တော့်မှာ အပန်းဖြေစရာဆိုလို့ 
Youtube သာရှိပါသည်။ စိတ်ညစ်ရင် မနက်ခင်းကမ်းခြေသွားပါသည်။ မနက်(၇)နာခွဲတွင် ကျွန်တော် ကမ်းခြေရောက်နေပါသည်။ Coney Island ကမ်းခြေတွင် မနက်ခင်းစောစောစီးစီးလမ်းလျှောက်ရတာ အရသာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လင်းထိန်နေသည့်အချိန်တွင် စိတ်ကလန်းဆန်းနေပါသည်။ အင်မတန်ကြိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် မွန်းကျပ်နေတာတွေကြောင့် စိတ်က မပေါ့နေတတ်ပါ။ ကမ်းခြေရောက်သည့်အခါ စိတ်ကပေ့ါပါးသွားပြီး ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုသောခံစားချက်တွေ ရောက်လာပါသည်။
ကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အသက်(၁၄)နှစ်တွင်ရောက်လာပါသည်။ ဘာ TOFEL မှ မဖြေခဲ့ပါ။ ဒီအတိုင်း လေဆိပ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပြောင်းရင်း ရောက်ချလာတာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွက် ခက်ခဲပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာသည် ခက်ခဲပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက် ကောင်းအောင် အင်္ဂလိပ်စာတွေကို အသံထွက်ဖတ်ခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် (၁၁)တန်း ၊ (၁၂)တန်းအထိ အထက်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းတက်ရတာ မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုကြာပါသည်။ ဘ၀ဆိုတာ ခက်ခဲမှုတွေကြားကနေ ပျော်အောင်နေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် အရာမှန်သမျှကို မေ့ပြီးဂီတထဲတွင် ခဏလောက်နစ်မျောနေအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ဂီတကို အင်မတန်ဝါဿနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ flute မှုတ်ခြင်း ၊ စန္ဒရားတီးခြင်းတို့ ကိုလုပ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဧ။်ဘ၀လို့ ပြောလို့ ရပါသည်။ ကျောင်းစာဆိုတာ လုပ်ရမည်ဆိုတာသိပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ မလုပ်ချင်ပါ။ လုံးဝကိုမလုပ်ချင်တဲ့ အချိန်လည်းရောက်ဖူးပါသည်။ Marching Band ကို ကျွန်တော့် band teacher က လာပါလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော် audition ( အရည်အချင်း မှီမမှီပြရခြင်း ) လုပ်ပါသည်။ သူ့ ရှေ့ တွင် ကျွန်တော် My Heart Will Go On အဓိက melody ကိုမှုတ်ပြရပါသည်။ ကျွန်တော့်ဘေးတွင် ထိုင်သော Hong Kong ကလာသော ကောင်မလေးသည်လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီသီချင်းကိုပဲရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းဘ၀တွင် ခင်မင်ရသော အပေါ်ယံသိသောသူများသည် ဂီတအခန်းကသာဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ နှင့်ကိုယ်က ၀ါဿနာလည်းတူ ၊ နာရီပေါင်းများစွာလည်း အတူတူလေ့ကျင့်ပြီး ကုန်ကျတာဖြစ်သည့်အတွက် သူတို့ ကို နည်းနည်းကြိုက်ပါသည်။ ကျောင်းက 2:48 ဆိုရင် ခေါင်းလောင်းထိုးပြီး ပြီးသည့်အခါ ကျွန်တော် ပထမထပ်က Band Room ကိုသွားပြီး flute ကိုထုတ်ပြီး စလေ့ကျင့်ပါတော့သည်။ ကျွန်တော် ဂီတကို စိတ်ဖြေရာအနေနှင့် ယူဆပါသည်။
Marching Band ဂီတသည် အင်မတန်ပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ ချီတက်ရသည့် သီချင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပျော်စရာ ဂီတဖြစ်ပါသည်။ High Notes တွေများပါသည်။ လျှာကို အပေါ်ပင့်ပြီး မှုတ်ရသော note တွေများပါသည်။ Grenade ဆိုသည့် သီချင်းနှင့် Katy Perry’s Firework ကို အတော်မှုတ်ရပါသည်။ Grenade ဆိုသည့် သီချင်းကို အင်မတန်ကြိုက်ပါသည်။ အလွတ်တောင်ရပါသည်။
Flute တူတူမှုတ်တဲ့သူငယ်ချင်းနှင့်တွေ့ ရသည့်အတွက် ၃နာရီမရောက်ခင်ကတည်းက စဉ်းစားနေမိပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျောင်းပြီးတာနှင့် တစ်ချို့ က အိမ်မပြန်ကြပါ။ ကျောင်းတွင် အားကစားအသင်း ၊ ကလပ် တွေ ၊ ပြဇတ် ၊ ကျွန်တော်ဆို ဂီတကိုအင်မတန်ဝါဿနာပါလို့ Marching Band တွင် ၀င်ပါပါသည်။
ပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ Marching Band သည် တစ်ပတ်နှစ်ခါပဲတွေ့ ပါသည်။ ထိုနှစ်ရက်ပဲရှိသော နေ့ များတွင် ကျွန်တော့်တွင် ဂီတချိန် (၂)ချိန်ရှိပါသည်။ မနက်ခင်းတွင် Intermediate Band, ညနေပိုင်းတွင် Marching Band ဖြစ်ပါသည်။ စာလုပ်ပြီးဦးနှောက် ၊ စိတ်ပင်ပန်းရင်လည်း သီချင်းပဲနားထောင်ပါသည်။ Library ထဲတွင် စာကြည့်နေရင်း ပင်ပန်းသောအခါ စာကြည့်တာကို ခဏရပ်ပြီး၊ ipad က Youtube တွင် ကိုယ်ကြိုက်သည့်သီချင်းများကို နားထောင်ပါသည်။ Beethoven’s Ode to Joy သည် အင်မတန်နားထောင်လို့ ကောင်းပါသည်။ ကျွန်တော်နေ သည့် အိမ်နားတွင် စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ထိုစာကြည့်တိုက်သည် အထက်တန်းကျောင်းကာလ အထူးသဖြင့် (၁၁)တန်း တစ်နှစ်လုံး နှင့် (၁၂)တန်း အစပိုင်းတွင် ကျွန်တော်ပုံမှန်သွားသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ ညနေပိုင်း ကျောင်းကပြန်လာရင် ကျွန်တော် အိမ်ကိုပြန် ၊ ထမင်းမြန်မြန်စားပြီး စာကြည့်တိုက်ကို တန်းသွားပါသည်။ စာကြည့်တိုက်တွင် တစ်ခါတစ်လေ ဆူညံနေတတ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကြားရတဲ့အသံက တူနေတာကြောင့် နည်းနည်းတော့ ပြဿနာမရှိပါ။ အသံကြားရင်လည်း အာရုံကိုစူးစိုက်ပြီး လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် ကလေးအသံတွေနှင့် ငယ်သောကလေးတွေ စကားပြောသောအသံတွေဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်တွေဝိုင်းရံထားသော နေရာဖြစ်၍ စာလုပ်ချင်စရာပုံစံပေါက်ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် ကျွန်တော်ပုံမှန်စာလုပ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်တွင် ပုံမှန်ထိုင်သော နေရာရှိပါသည်။ ထိုနေရာတွင်သာ ပုံမှန်ထိုင်ပါသည်။ လူရှိရင်တော့ တစ်ခြားနေရာ ထိုင်ပါသည်။ (၁၁)တန်းတွင် AP World History အခန်းယူသည့်အတွက် သမိုင်းကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါသည်။ သမိုင်းအကြောင်းသာဖတ်ချင်ခဲ့ပါသည်။ Trignomentry, Physics တွေကို လုံးဝ လုံးဝစိတ်မ၀င်စားပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသည့် သမိုင်းကိုသာဖတ်ချင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သမိုင်းအကြောင်းကို စဉ်းစားရတာကြိုက်ပါသည်။ Industrial Revolution ( စက်မှုတော်လှန်ရေး ) အစပိုင်းတွင် စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ရသော ကလေးတွေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးစဉ်းစားရပါသည်။ ရုရှားအကြောင်းကိုလည်း စဉ်းစားရတာကြိုက်ပါသည်။ Colombus အမေရိကားကို ဘယ်လို လာခဲ့လဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ဒီအကြောင်းကို စာအုပ်စင်တွင်လိုက်ရှာပြီး ဖတ်ခဲ့ပါသည်။ သမိုင်းဖတ်ရင် အင်မတန်ပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ Atlantic အကြောင်းကို ဖတ်ရတာ ပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ သမိုင်းသည် အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါသည်။ စိတ်ဝင်စားပြီး စိတ်ဝင်စားနေပါသည်။ ဘ၀ကို ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ကိုယ့်ကို စိတ်ကျေနပ်စေတာတွေ ၊ ပျော်စေတာတွေလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဘ၀တွင် ကိုယ်ပျော်လား မပျော်ဖူးလားဆိုတာ ကိုယ်အသိဆုံးဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခြားသူတွေကို လိမ်လို့ ရပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လိမ်လို့ မရပါ။ လိမ်လိုက်ရင် ခံစားချက်ကတန်းသိပါသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကို ရိုးသားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကားမှာနေတာ ကျွန်တော် ကြိုက်တာတွေအကုန်မပာုတ်ပါ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ၊ အဆင်မပြေဖူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ကန်စွာပြောဖို့ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါသည်။ ဘယ်တော့မှ ပာိုဆရာမ ပြောတာ ၊ ဒီဆရာပြောတာကို ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ရင် ကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘ၀ အတွက် ကျွန်တော်သာစဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်သည်။ ဘယ်သူမှ ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုအပ်ပါ။ ထိုအချိန်က ဆရာတော်ဦးဇော်တိကဧ။် စာအုပ်တွေကို နေ့ တိုင်းနီးပါးဖတ်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေလိုအပ်နေပါသည်။ အသက်ရှင်နေလျက် ဘ၀သေနေသူ စာအုပ်သည် ကျွန်တော့်ဧ။် ရွေးချယ်ချက်တစ်ချို့ ကို ထိုအချိန်က လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။ တစ်ခုခုပြဿနာ ၊ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ ထင်ရင် ထိုစာအုပ်ကို ပြန်ပြီးသွားဖတ်ပါသည်။ များသောအဖြင့် ရထားပေါ်တွင် ကျောင်းပြန် ၊ ကျောင်းသွား ဖတ်ဖြစ်တာများပါသည်။ ကျောင်းကပြန်တိုင်း Q train ကနေ West 8 Accquarim ရထားဂိတ်တွင်ဆင်းပြီး F train နားကနေ Coney Island ကိုလှမ်းမြင်ရသည့် နေရာတစ်နေရာရှိပါသည်။ ထိုနေရာကို နေ့ တိုင်းနီးပါးသွားပြီး ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကြည့်ပါသည်။ ရေတွေက နေရာတိုင်းတွင် ရှိနေတတ်ပြီး ရေတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုရပါသည်။ တစ်နေ့ လုံးဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပါသည်။ Reflection လုပ်တာဖြစ်ပါသည်။ F train လာရင် F train ပေါ်တက်ပြီး အိမ်ပြန်ပါသည်။ ကျွန်တော်ဘာကျူရှင်မှ မတက်ခဲ့ပါ။ အမေရိကန်ဆရာတွေသည် ကျူရှင်လုံးဝမပေးပါ။ နားမလည်ရင် သွားမေးရင်ရှင်းပြပါသည်။ ကျွန်တော့်တွင် မြန်မာကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သူက အမေရိကန်က စာတွေကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ပါသည်။ သူက ကျွန်တော်နားမလည်သော Physicsတွေကို ရှင်းပြပါသည်။ သူ့ ကြောင့် Physics တွင်နည်းနည်းပါးလွယ်ကူခဲ့ပါသည်။ Youtube တွင်လည်း နားမလည်ရင်နှိပ်ကြည့်ပါသည်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ (၁၁)တန်းနှစ်က ပြီးဖို့ နီးလာပါသည်။ ပျော်စရာအချိန်တွေဆိုလို့ ဂီတအချိန် နှင့်ရေကူးအချိန်သာရှိပါသည်။ ကျွန်တော်က ရေကူးတာဝါဿနာပါလို့ ရေကူးအခန်းကိုသာ အားကစားအချိန်အတွက် ယူဖြစ်ပါသည်။ နေ့ တိုင်းလည်း ကိုယ်ပိုင် ဂီတလေ့ကျင့်ချိန်ရှိပါသည်။ နေ့ တိုင်းနီးပါး လေ့ကျင့်ဖြစ်ပါသည်။ (၃၀)မိနစ် ကနေ (၁)နာရီ (၅)မိနစ်လောက်ထိ flute ကို လေ့ကျင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာလိုလိုနှင့် အချိန်တွေကမြန်လှပါသည်။ ဒီလောက်ထိ မမြန်ပါနဲ့ အုန်း။ အချိန်လေးနည်းနည်းလိုနေလို့ ပါလို့ ပြောလည်းမရပါ။ AP World History ကိုဖြေရပါသည်။ အဆင်ပြေသည်ပာု ပြောလို့ ရပါသည်။ အက်ဆေးတွင်ရေးရတာ မလွယ်ကူဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါသည်။ စာမေးပွဲမတိုင်ခင် အချိန်နှင့်အက်ဆေးတွေ ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါသည်။ Princeton Review Essay Questions စာအုပ်ဝယ်ပြီး အက်ဆေးမေးခွန်းတွေလည်း လေ့ကျင့်ခဲ့ပါသည်။ စာမေးပွဲပြီးတာနှင့် Coney Island Beach ကို တန်းပြေးပြီးရေတွေကိုကြည့်ကာ ကျောက်တုံးပေါ်တွင်ထိုင်ပါသည်။ ဘ၀ကခုမှ ပေါ့ပါးသွားသည်ပာု ခံစားရပါသည်။ နည်းနည်းတော့ ဘ၀က ပေါ့ပါးသွားပါသည်။ ပိုစိတ်ချမ်းသာသွားပါသည်။ မကြာမီ Trignomentry, Physicsအတွက်ပြင်ရပါသည်။ ပြီးတော့ New York State Regent ဖြေရပါသည်။ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူတိုင်းဖြေရတာကြောင့် အရင်ကလည်း U.S History, English, Geometry, Chemistry, Algebra တွေဖြေဖူးတာကြောင့် သိနေပါသည်။ Global History က အင်မတန်လွယ်ပါသည်။ (၁၀၀)ရချင်တယ်လို့ မှန်းထားပေမဲ့ (၉၈)သာ ရခဲ့ပါသည်။ပျော်ဖို့ ကောင်းခဲ့သလို ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
(၁၂)တန်းမတိုင်ခင် နွေရာသီသည် ခက်ခဲပါသည်။ှSAT အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ရူးသွားနိုင်သည်ပာု ပြောလို့ ရပါသည်။ ရှိသမျှစာအုပ်နီးပါးကို ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်တောင်မစဉ်းစားချင်ပါ။
(၁၂)တန်း ပထမ semester သည် လူကိုပင်ပန်းစေပါသည်။ AP Calculus AB ကြောင့် ပင်ပန်းရပါသည်။ အိမ်စာတွေကသိပ်များပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအတန်းထဲတွင်သင်တာနားမလည်တာကြောင့် အိမ်စာတွေလုပ်ရတာတော်တော်ကြာပါသည်။ မြန်မာကျူရှင်ဆရာကယ်ပေလို့ နားလည်ခဲ့ပါသည်။ SAT လည်းဖြေရပါသည်။ SAT World History Subject Test ကိုလည်း သွားဖြေခဲ့ပါသည်။ ဒီကြားထဲ AP European History လိုချင်တာ မရှိလို့ကျောင်းဖွင့်ခါစတွင် Social Science Department Chair လက်မှတ်နှင့် AP Economic အခန်းကိုယူခဲ့ပါသည်။ ဒီအခန်းကလည်း အိမ်စာလုပ်ရပါသည်။ AP Calculus ကြောင့် ဘ၀က အိပ်ချိန်တောင် (၈)နာရီမပြည့်ခဲ့ပါ။ အိပ်ရေးမ၀တာကြောင့် မျက်စိထဲတွင် အလင်းအမှုန်လေးတွေ နေရာတိုင်းမြင်ခဲ့ရပါသည်။ လူကလည်းအရူးအတိုင်း ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိပါ။ Macaualay Honors at CUNY ကို လျှောက်ပြီးရာတွင်ှSAT အပိုင်းက ပြီးသွားပါသည်။ နောက်တော့ မခံနိုင်တာကြောင့် Math Department Chair နှင့် စကားများပြီး AP Calculus AB ကနေ ရအောင် drop လုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၂)တန်း ပထမ Semster ဒီလိုနှင့်ပင် ပြီးသွားပါသည်။ ပျော်ဖို့ မကောင်းသော Semester ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယှSemester အတွက် လုံးဝရပ်လိုက်ပါသည်။
ဒုတိယက Semester ကိုစပါသည်။ထိုအချိန်သည် အင်မတန်လွယ်ကူသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းတက်သော ကာလတွင် အင်မတန်လွယ်ကူသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခြားအခန်းတွေက လွယ်ပြီး ဂရုတောင်မစိုက်ခဲ့ပါ။
SAT လည်း ဖြေပြီးပါပြီ။ (၉)တန်းကနေ (၁၁)တန်းအထိ (၃)နှစ်တာ ပျမ်းမျှရမှတ်ကိုယူပြီး ကောလိပ်လျှောက်ရတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်းလျှောက်ပြီးပါပြီ။ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။ အကုန်လုံးပြီးပြီး ပာုခံစားရပါသည်။ အနားယူဖို့ သာကျန်ပါတော့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းကို သာ တစ်ဝကြီးခံစားနေမိပါသည်။ Senior ဆိုပြီး Year Book အတွက် ဓာတ်ပုံတွေတူတူရိုက်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်နောက်နှစ် ဒီကျောင်းကနေထွက်ခွာရတော့မယ်ဆိုတာ နည်းနည်းသိနေတာကြောင့် လွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေက ရနေပါသည်။ ဒီကျောင်းတက်တာ (၃)နှစ်ခွဲလောက်ရှိနေပြီး အမှတ်တရတွေက နေရာတိုင်းနီးပါးမှာရှိနေပါသည်။ ပိာုနောက်အပေါက်လှေကားတွင်အမှတ်တရရှိသည်။ ဒီပောာခန်းတွင် အမှတ်တရရှိတယ်။ ဆရာမတွေအပေါ်လည်း အမှတ်တရရှိပါသည်။ အခန်းနံပါတ် 415 တွင်လည်း အမှတ်တရရှိသည်။ ၄၁၅သည် ကျွန်တော်ကြိုက်သော ၊ စိတ်ဝင်စားသော AP World History သင်သောအခန်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခန်းကို အင်မတန်လွမ်းသည်။ အင်မတန်လည်းချစ်သည်။ နည်းနည်းခက်ခဲသည့်အခန်းဆိုလို့ AP Economic သာရှိပါသည်။ မေလတွင် AP Macroeconomic ဖြေရမှာဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ပာာကိုယ် McGrawHill စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအဓိကထားပြီး ဖတ်ပါသည်။ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ နားလည်တဲ့အထိ ပြန်စဉ်းစားပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြသည့် ကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်မှမရှိပါ။ သင်ပေးတဲ့ဆရာက ဘာဆိုဘာမှမသိပါ။ ဒီဘာသာရပ်ကို သင်ချင်တဲ့ပုံစံမပေါက်ပါ။ ဂရုလည်းမစိုက်ပါ။ ကျွန်တော်က AP World History ဖြေဖူးသည့်အတွက် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပါသည်။ မေးခွန်းပောာင်းတွေကို ကိုယ့်ပာာကိုယ် အင်တာနက်တွင်ရှာပြီး Print ထုတ်ပါသည်။ အချိန်နှင့် လေ့ကျင့်ပါသည်။ Review Book တွေလည်း ငှားပြီး ကိုယ့်ပာာကိုယ့်လေကျင့်ပါသည်။ ကြာလာတော့ လွယ်လွန်းလာပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေတော့ နည်းနည်းလွယ်ပါသည်။
ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေကျရင် စာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပါနေရင် လုပ်ရတာလွယ်ပါသည်။ Economic Concepts တွေကို နားလည်သည်အထိ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါဖတ်ပါသည်။ လုံးဝ လုံးဝကို နက်နက်နဲနဲနားလည်သည်အထိ သိသည့်တိုင်အောင် ထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းစားပါသည်။ စာမေးပွဲအင်မတန်မလွယ်ပါ။ မေးခွန်းတွေက နားလည်တာကိုစမ်းသပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် နက်နက်နဲနဲနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အကျင့်က ထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေရတာကို ကြိုက်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် နည်းနည်းပါးပါး ဖိအားရှိတာနှင့် စဉ်းစားပြီးသည့်အခါ ခေါင်းကိုက်တာကလွှဲ၍ ကျန်တာကလုပ်ချင်စရာဖြစ်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်ထဲတွင် တစ်ချို့ ကဆူညံနေသော်လည်း ကျွန်တော်က တစ်ခုခုကို နက်နက်နဲနဲစဉ်းစားနေသောအခါ တစ်ခြားအသံတွေက တိုးသွားပါသည်။ အတွေးထဲတွင် ကျွန်တော်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့ လုပ်နေသော စဉ်းစားသံတွေက ပိုကျယ်လာပါသည်။ အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်သည် စဉ်းစားခြင်းကိုဦးစားပေးသည်။ နားလည်ဖို့ လိုအပ်သည်။ နားလည်တာကို ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်တွင် အသုံးချတတ်ရပါသည်။ Deep Thinker ( နက်နဲစွာစဉ်းစားတတ်သူ ) တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် စနစ်ကိုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက် မြေအောက်ခန်းတွင် စာလုပ်ပြီးသည့်အခါ အထူးသဖြင့် Practice Exam လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ခေါင်းတွေကိုက်တတ်တာကြောင့် ကမ်းခြေကိုသာ ပြေးပါတော့သည်။ Coney Island Beach သည် ထိုအချိန်က ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် အရေးပါသောနေရာတစ်နေရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စာလုပ်ပြီးလို့ အရမ်းပင်ပန်းသည့်အခါ ကမ်းခြေကိုသာ ပြေးပါသည်။ ကမ်းခြေတွင်နေခြင်ပါသည်။ ကမ်းခြေတွင် လမ်းလျှောက်ရတာ အင်မတန်ကြိုက်ပါသည်။ လေအေးအေးတွေ တိုက်နေပြီး ရေတွေကိုမြင်ရ ၊ ဆားငံရေအနံ့ တွေ ရတာကြောင့် အင်မတန်ပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။
(၁၂)တန်း ဒုတိယ semester တွင် ညနေပိုင်းတွင် Musical တွင်သွားပြီး flute မှုတ်ပါသည်။ အစကတော့ ဘာလဲပာ။ နောက်တော့သွားမယ်လို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါသည်။ Musical သည် show တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလို ပြဇာတ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ခံတေးဂီတကို band ကနေ လုပ်ရချင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သွားမှုတ်တာပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ ကျောင်းသားတွေအချင်းအချင်းမှုတ်ကြ။ Let’s get loud ကို ဂီတအခန်းတွင်ပဲ မှုတ် ရတာအင်မတန်ပျော်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ ဂီတအခန်းထဲတွင် နေရတာပျော်သည်။ တစ်ကျောင်းလုံးတွင် ဂီတအခန်းကိုအင်မတန်ကြိုက်သည်။ ဒုတိယကြိုက်သောနေရာက ရေကူးကန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး ပထမထပ်တွင်ရှိပါသည်။
ှSenior Award Night တွင် မထင်မှတ်ပဲ ဆုရခဲ့ပါသည်။ ဂီတနှင့်ပတ်သတ်သောဆုဖြစ်ပါသည်။ Graduation Day သည်ရောက်လာပါသည်။
အထက်တန်းကျောင်း graduation day ရောက်လာပါသည်။ ထိုရက်မရောက်ခင် ဘွဲ့ ဝတ်စုံတွေကိုသွားယူရပါသည်။ ထူးခြားသော ခံစားချက်တွေကိုရပသည်။ ရှေ့ ဆုံးနားက နေရာတွင်လာလို့ ထို နေ့ တွင် မထင်မှတ်ဘဲ ရှေ့ နားတွင်စောင့်ရပါသည်။ Marching Band က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ ပါသည်။ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတာ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ ရပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းပါတော့ ဖုန်းကိုထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို အံ့သြစေတာက ကျွန်တော်စင်ပေါ်ကို သွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စင်ပေါ်တွင် ထိုင်ရတာခံစားချက်ကောင်းစေပေါသည်။ ဒီနှစ်တွင် Valedictorian နောက်တွင် ကျွန်တော်ထိုင်ရပါသည်။ သူ့ မိန့် ခွန်းပြောမယ်ဆိုတာ ကြိုသိထားပြီး သူ့ မိန့် ခွန်းကို ဖတ်ချင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောပြီး သူက ငါရေးပြီးရင် ပေးမယ် ပေးမယ်ဆိုပြီး နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ရှုပ်တော့ သူ့ ကိုမေ့သွားပါသည်။ သူ့ ကို Physics Honor အခန်းတွင်းကတည်းက ကျွန်တော်သတိထားမိပါသည်။ မေးခွန်းတွေသိပ်မေးတတ်ပြီး တကယ်စာကြိုးစားသော ကောင်မလေးပုံစံပေါက်ပါသည်။ သူ Valedictorian ဖြစ်လာမယ်လို့ မထင်ပါ။ ညာဘက်တွင် Department တွေဧ။် Chair တွေကထိုင်နေပါသည်။ စင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရတာ ကြိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်တွင် Arista Honor Society စလွယ်လေးကိုပတ်ထားရပြီး လူအများစုက ဒါတွေကိုမပတ်ထားကြပါ။ စင်ပေါ်ကလူတစ်ချို့ က ပတ်ထားကြပါသည်။ Jazz Band သည် သီချင်းတွေကို ဖျော်ဖြေနေပါသည်။ ကျွန်တော့်ဧ။် symphonic band ဆရာက band ကို ပြောနေပြီး သူ့ ကို ကျွန်တော်မြင်ရပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို James Madison High School Department Medal in Music ဆုကိုပေးပါသည်။ Medal ဆုလေးဖြစ်ပါသည်။ ရတော့ ထူးခြာသောပျော်ရွှင်မှုကိုရပါသည်။ ထပြီး ရှေ့ ကိုသွားပြီး ဆုယူတော့ ထူးခြားသော ခံစားချက်ကို ရပါသည်။ ရပြီးတော့ပြန်ထိုင်လိုက်ပါသည်။ စင်ပေါ်တက်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ ကျွန်တော့်အလှည့်ကို စောင့်ရပါသည်။ ကျွန်တော် သွားရမည့်ဆရာမတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူတွေကို အုပ်စုခွဲထားပါသည်။ သူ့ ဦးဆောင်တဲ့နေရာဆီ ခဏသွားပြီး စင်ပေါ်တက်ဖို့ စောင့်ရပါသည်။ ကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်တော့ စင်ပေါ်တက်ရပြီး Principal နှင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး Students Government Advisor နှင့်လည်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆွဲရပါသည်။ စင်ပေါ်တက်ရသည့်အခါ ခဏလောက်ထူးခြားသော စိတ်လှုပ်ရှားသောခံစားချက်ကိုရပါသည်။ လူတွေအများကြီးရှေ့ မှာ လမ်းလျှောက်ရတာကြောင့်ဖြစ်မည်ပာု နောက်မှနားလည်လိုက်ပါသည်။ စင်ပေါ်က ဆင်းဆင်းခြင်း AP World Historyဆရာ ကနေ Congratulation Kyaw ဆိုပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆတ်ပါသည်။ Physics Teacher ကလည်း Congratulation Kyaw ဆိုပြီးနှုတ်ဆတ်ပါသည်။ ပြီးတော့ စင်ပေါ်ကို ကျွန်တော်ပြန်တက်ပါသည်။ ခဏလောက် ဆက်စောင့်ရပါသည်။ နောက်တော့ ခုချိန်ကစပြီး ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူအားလုံး အောင်သွားပြီလို့Principal ကနေ ပြောသောအခါ အားလုံးက ဦးထုပ်တွေကို လေထဲလွှတ်လိုက်ပြီး အော်ကြပါသည်။ စင်ပေါ်တွင် ဖုန်းမသုံးရလို့ ပြောသည့်ကြားက ကျွန်တော်ထိုအချိန်ကို ရအောင်ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။
Brooklyn College ကိုသွားရမည်။ ထိုကျောင်းက ကျွန်တော့်ကို လက်ခံထားသည်။ Macaualy Honors at the CUNY ( City University of New York ) ကိုလျှောက်တာ City College, Brooklyn College, College of Staten Island က လက်ခံပါသည်။ ထိုကောလိပ်တွေထဲက Brooklyn College ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
Posted by Nwawt seng at 11:07 PM0comments
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် (၆)နှစ်တာ ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အပိုင်း(၂)
Kyaw Tun is with Kyaw Tun.
January 21 at 4:34am ·
Posted by Nwawt seng at 11:02 PM0comments
USA Kachin Blog
သင်တန်းမတက်ဘဲ အွန်လိုင်းကနေ တတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ . ၁ + ၂
(Zawgyi) ဘ၀မှာ တခါတလေ `အဲဒါလေး ငါတတ်ရင် ကောင်းမှာပဲ´လို့ စိတ်ကူးမိတဲ့ အခါတွေ ရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မရှိ၊ အဆက်အသွယ် မရှိတဲ့သူတွေ...
Kyaw Tu n Like Page · ထိုကျောင်းအသစ်ကိုရောက်သည့် ပထမဆုံးနေ့ တွင် Required Art ဆိုသည့်အခန်းတွင် မြန်မာကောင်မ...
အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြေမယ့်သူတွေအတွက် မေးခွန်း ၁၀၀
Thu Lay ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ လိုအပ်နေသူများအတွက်ပါ USCIS လို့ဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့် လူဝင်မှုဋ္ဌာနရဲ့မေးခွ...
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အခမဲ့ တက်နိုင်တဲ့ ဒီပလိုမာနှင့် အခြား အသိမှတ်ပြု သင်တန်းပေါင်း ၄၅ ခု
Programming, Design, Online Marketing, Communication, Writing, Law အစရှိသဖြင့် ဘာသာရပ် အသီးသီးများကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အခမဲ့ လေ့လာခွင့်ရ...
ဖတ်ချင်သမျှ စာအုပ် အားလုံး နီးပါး ဖတ်ရမယ်( E book-link ) Saturday, December 7, 2013 ထပ်ပြီး စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. ဖတ်ချင...
https://www.britannica.com " ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ( ၇ဝဝဝ ) ကို လူ ( ၁ဝဝ ) နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် " +3 ကမ...
Online study အင်တာနက်ပေါ်က ပညာဒါန
Open Course Ware ဆိုတာဘာလဲ။ ‘အိုးပင်းကို့စ်ဝဲ’ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားလျက်ရှိသော သင်တန်းများကို အင်တ...
အားလုံး အသုံးပြုလို့ရအောင် အခမဲ့ ပညသင် ကြားပေးတဲ့ webside link များအား မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
YoYarLay with Thinzar Melody and 34 others တကယ် အခမဲ့ပါ။ မယုံလို့ တစ်ခုလောက်ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ဗီဒီယိုဖိုင်ယူမလား၊ PDF လား၊...
Kyaw Tun · ထိုကျောင်းအသစ်ကိုရောက်သည့် ပထမဆုံးနေ့ တွင် Required Art ဆိုသည့်အခန်းတွင် မြန်မာကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် တွေ ...
www.myordbok.com/‎ http://www.myanmar-dictionary.org/ http://www.lexilogos.com/english/burmese_dictionary.htm http://mmdictionary.com/ ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် (၆)နှစ်တာ ကြိုးပန်းဆောင်ရွ...
Copyright © EDUCATION NETWORK. Designed for Universities in California - Universities in Texas, Universities in New York, Universities in Florida